ယနေ့ငါဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာ? - 16.06.2018 - Iris က💡💻 - မျက်လုံးကာကွယ်မှုများအတွက် software ကို, ကျန်းမာရေးနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား🛌👀
ယနေ့ငါဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာ? – 16.06.2018
ငါ Iris ကပိုပြီးလူကြိုက်များထားတဲ့စိတ်ကူးအောင်ဖို့ဘယ်လိုစဉ်းစားနေတုန်းတစ်ခုခုကပ်လျှင်ဒါနဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းငါဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုမှတ်မိနိုင်ပါတယ်ဘူးသောအရာကိုရေးသားဖို့စိတ်ဆီသို့ရောက် လာ. ,.
ငါ SEO ဆိုသည်မှာအကြောင်းကို Facebook ပေါ်မှာအချို့ကြော်ငြာကိုမြင်လျှင်ငါဆောင်းပါးတွေထဲကနေအကြံပြုအချို့သောအမှုအရာလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်
Bing မှ webmaster များမှ Iris ကထည့်သွင်းခြင်း
ငါနောက်ဆုံးအဘို့လွဲချော်တစ်ခုခုဖြစ်သည့် Bing မှမှ Iris ကဆက်ပြောသည်3နှစ်ပေါင်း
ငါသာ Google ရှာဖွေရေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်
Yandex များ webmaster မှ Iris ကထည့်သွင်းခြင်း
ငါသည်လည်း Yandex ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များနှင့်ကွန်ရက်ထိန်းသိမ်းသူများမှ Iris ကဆက်ပြောသည်
keyword ကိုသုတေသနအတွက် Tools များ
KWFinder, SEMrush, နှင့် Ahrefs
ဘာသာပေါင်းစုံ SEO ဆိုသည်မှာအကြောင်းကိုမမေ့မလြော့ပါ
နီးလ် Patel က, တစ်ဦးလူသိများတဲ့ SEO ဆိုသည်မှာ, သို့ကသူ့ဘလော့ဂ်ဘာသာပြန်ဆိုအားဖြင့်သူ့က်ဘ်ဆိုက်တခုတခုအပေါ်မှာစမ်းသပ်မှုသို့ပွေးလေ၏ 82 ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများ. ရလဒ်? သုံးပတ်အတွင်းသူတစ်ဦးကိုငါမြင်၏ 47% ခြုံငုံအသွားအလာအတွက်တိုးလာ! သူကားအဘယ်သူတစ်ဦးအပိုဆောင်းချင်ပါဘူး 47%? တကယ်တော့, အခါ SERPs အတွက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့လာ, တစ်ခါတစ်ရံဘာသာပေါင်းစုံလမ်းကြောင်းသွားသင့်လုပ်ငန်းများအတွက်အမြန်ဆုံးအနိုင်ပေးတဦးဖွစျနိုငျ.
ဒီတစ်ခါလည်းဒီ SEO ဆိုသည်မှာနှင့်အတူကူညီကြမည်
ဘာသာများအတွက်ပြင်ဆင်ရန် panel ကို၏ CSS ကိုပြောင်းလဲသွားတယ်
ရှေ့နဲ့ selection အတွက်ဖြစ်ဖို့ခေါင်းစဉ်ကိုဖန်ဆင်း
ထူးခြားတဲ့ရည်ညွှန်းပြီး domains များ၏နံပါတ်တစ်ခုလုံးကိုလေ့လာမှုမှာအင်အားအကောင်းဆုံးဆက်စပ်မှုခဲ့သည်
ကောင်းသော tool ကို Ahrefs ဖြစ်ပါသည်
စီမံချက် markup fix မှ todo လိုအပ်နေသောူပည်သူ
Yoast SEO ဆိုသည်မှာစစ်ဆေးမှုများ
1 တွင်4ကထက်ပိုမိုကြာလျှင်ဧည့်သည်တစ်ဦးက်ဘ်ဆိုက်စွန့်လွှတ်မယ်လို့4load ဖို့စက္ကန့်.
ကွန်ရက်စာမျက်နှာပိုင်ရှင်များမျှသာရှိ5သူတို့ထွက်ခွာထည့်သွင်းစဉ်းစားမတိုင်မီဧည့်သည်များထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့စက္ကန့်.
74 ဒါဟာထက်ပိုရှည်ကြာလျှင်မိုဘိုင်း site ကိုရယူသုံးအသုံးပြုသူရာခိုင်နှုန်းကိုစွန့်ခွာလိမ့်မည်ဟု5load ဖို့စက္ကန့်.
စာမျက်နှာဝန်အချိန်အတွက်တိုင်းတစက္ကန့်နှောင့်နှေးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင် $1.6 အမေဇုံအဖြစ်ကြီးမားသောအွန်လိုင်းကုန်သည်များအတွက်နှစ်စဉ်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ဘီလျံအထိ.
track တဲ့ Keyword အဆင့် – ထောက်ခံအုကူံပ AccuRanker
တစ်စျေးကွက်ရုပ်သံလိုင်းအဖြစ် Buzzfeed မှ Publish
Reddit ရဲ့သင်၏အချပ် Get လုပ်နည်း 150 သန်း Pageviews
အတူနယူးစျေးနှုန်းစာမျက်နှာ 50% discount by default
Posted in, Story